Yangon Payment Service (YPS) အတွက် POS Device များကို YBS ယာဉ် ၁,၅၀၀ တွင် တပ်ဆင်နေပြီဖြစ်ပြီး Payment Card များရောင်းချမည့်နေ့ကို မကြာမီ အသိပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း YPS စနစ်အတွက်ဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Asia Starmar Transport Intelligent Co.,Ltd. ထံမှသိရသည်။
Yangon Payment Service (YPS) စနစ်အတွက် လိုက်နာရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (Service Level Agreement) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် Asia Starmar Transport Intelligent Co.,Ltd. နှင့် ယာဉ်လိုင်းကုမ္ပဏီများဖြစ်သော Yangon Urban Public Transportation Co.,Ltd. (YUPT), Yangon Bus Public Co.,Ltd. (YBPC), Bandoola Public Co.,Ltd. , Golden Southern Transport Public Co.,Ltd. တို့ပူးပေါင်းကာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ထို့နောက် POS (Point Of Sale) Device များကို YBS ယာဉ် ၁,၅၀၀ တွင် စတင်တပ်ဆင်နေပြီဖြစ်ပြီး အဆိုပါယာဉ်လိုင်းများမှာ YUPT ကုမ္ပဏီမှ YBS ၂၊ ၃ ၊ ၄ ၊ ၇ ၊ ၈ ၊ ၁၀ ၊ ၁၁၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၆၊ ၄၀၊ ၅၈၊ ၅၉၊ ၆၅၊ ၈၄ စသည့်ယာဉ်လိုင်းများမှ ယာဉ်များကို (၁၅) နေရာ၊ YBPC ကုမ္ပဏီမှ YBS ၃၇ (ထောက်ကြံ့၊ ဝါယာလက်၊ မှော်ဘီ၊ လှည်းကူး) ၄၃၊ ၆၂၊ ၇၂၊ ၈၇၊ ၈၈၊ ၈၉၊ ၉၆ ယာဉ်လိုင်းများမှ ယာဉ်များကို (၁၀) နေရာ၊ ဗန္ဓုလ ကုမ္ပဏီမှ YBS ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၂၅၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၅၅ ယာဉ်များကို (၃) နေရာ၊ Golden Southern ကုမ္ပဏီမှ YBS ၃၃၊ ၃၄၊ ၇၀၊ ၉၅ ယာဉ်များကို (၂) နေရာ စသဖြင့် နေရာများခွဲကာ တပ်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ YPS စနစ်အတွက် Payment Card များကို အများပြည်သူဝယ်ယူနိုင်မည့်နေ့ကို ထက်မံအသိပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Asia Starmar Transport Intelligent Co.,Ltd. ထံမှသိရသည်။
YPS စနစ်တွင် ယာဉ်စီးခကို ပုံသေသတ်မှတ်သွားမည်မဟုတ်ဘဲ ခရီးအကွာအဝေးပေါ်မူတည်ကာ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး YBS ယာဉ်များတွင် POS (Point of Sale ) Device များကို အရှေ့တံခါးတွင် တစ်လုံး အနောက်တံခါးတွင် တစ်လုံး တပ်ဆင်ထားပြီး ခရီးသည်မှ ယာဉ်ပေါ်သို့တက်သောအခါ Card တစ်ခါဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆင်းသောအခါတွင်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ Card ဖြတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။